FAHA-60 TAONAN’ NY FAHALEOVANTENA : Tsy hatao eny amin’ny Kianjaben’i Mahamasina ny matso
Tsy eo amin’ny kianja Barea Mahamasina no hotontosaina ny fankalazana ny faha-60 taonan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara, hoy ny Jeneraly Rakotonirina Lala Jaquis, Tale Jeneralin’ny serasera eo anivon’ny Minisiteran’ny fiarovam-pirenena. 14 février 2020
Mbola ao anatin’ny fanamboarana tanteraka io kianja io ankehitriny ary fantatra fa tsy mbola ho vita amin’ny 26 jona 2020 na teo aza ny fikelezan’aina nataon’ny orinasa nahazo ny tolotra. Araka ny loharanom-baovao azonay, eny Analakely na any Arivonimamo no hotanterahina ny matso, amin’ny 26 jona 2020. Nivory koa moa omaly ny teo anivon’ny seraseran’ny Minisiteran’ny fiarovam-pirenena mba hanomana izany fankalazana ny 26 jona izany.
Tsy maintsy jerena, hoy izy, ny lafiny maro toy ny fitandroana ny fandriam-pahalemana indrindra fa ny ain’ny Filoham-pirenena izay hanatrika ny matso.
Miankina amin’ny fivoaran’ny toe-draharaha ara-pahasalamana eto Madagasikara ihany anefa izany satria na ny fankalazana ny 29 marsa aza raha tsiahivina dia tsy azon’ny rehetra natrehina noho ny fisian’ny valanaretina coronavirus eto amintsika, ary mbola tao anatin’ny fihibohana isika tamin’izany.
Mety ho ny Tafika manao ny matso ihany no ho afaka miatrika izany, tsy maintsy hisy anefa ny fanompoam-pivavahana hanamarihana izany fetim-pirenena izany, hoy hatrany ny Jeneraly Rakotonirina Lala. Marihina fa vina sy ezaky ny Filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ny hamitàna ny kianja alohan’ny 26 jona saingy noho isika tafiditra ao anatin’ny fahasahiranana ateraky ny coronavirus dia izay hahafehezana haingana ity aretina ity aloha no laharam-pahamehana. « Ny fahasalamana no voalohan-karena » ka io olana io aloha no ezahina vahana.